China Ultrasonic Copper Aluminom Conversion 20Khz 3000w eldgbado ọkụ maka Motor na Transformer n'ichepụta na ụlọ ọrụ | Qianrong
Ultrasonic Copper Aluminom Conversion 20Khz 3000w eldgbado ọkụ maka Motor na Transformer
Nkebi Nke QR-X2020A QR-X2030A QR-X2040A
Ike 2000W 3000W 4000W
Ịgbado ọkụ Area 0.5-16mm2 0.5-20mm2 1-30mm2
Nsogbu Ikuku 0.05-0.9MPa 0.05-0.9MPa 0.05-0.9MPa
Ugboro 20KHZ 20KHZ 20KHZ
Voltaji 220V 220V 220V
Ibu opi 18KG 22KG 28KG
Dimension nke Horn 530 * 210 * 230mm 550 * 220 * 240mm 550 * 250 * 240mm
Generator Nha 540 * 380 * 150mm 540 * 380 * 150mm 540 * 380 * 150mm
Ultrasonic waya njikota ịgbado ọkụ na-eji elu-ugboro vibration ebili mmiri na-ebunye ka elu nke abụọ waya njikota workpieces na-ịgbado ọkụ. N'okpuru nrụgide, a na-etepụta ebe a na-ejikọ waya abụọ a na-ejikọ ọnụ iji mejupụta njikọ dị n'agbata usoro ihu igwe. Ihe bara uru bu na obu ngwa ngwa ma na echekwa ike. Ike njikọta dị elu, ezigbo ikuku eletriki, enweghị ọkụ, dị nso na nhazi oyi; ọghọm bụ na akụkụ ndị a na-acha ọkụ eletrik ekwesịghị oke oke (n'ozuzu na-erughị ma ọ bụ hà ka 5mm), nkwonkwo solder ekwesịghị ịdị oke, ọ dịkwa mkpa ka a rụgide ya.
Igwe ikuku na-ekpo ọkụ nke Ultrasonic waya anaghị achọ ntụgharị na kpo oku na mpụga, adịghị agbanwe site na okpomọkụ, enweghị nchekasị fọdụrụnụ, ma chọọ obere ọgwụgwọ weld n'elu weldment. Ọ bụghị naanị ọla ndị yiri ya, kamakwa n’etiti ọla dị iche iche nwere ike ịgbado ọkụ. Mpempe akwụkwọ ma ọ bụ filaments nwere ike ịgbado ọkụ na slab. Ultrasonic ịgbado ọkụ nke ọma eletriki na-eduzi dị obere karịa ume ugbu a ịgbado ọkụ na ọtụtụ ndị na-eji maka soldering nke na-eduga n'ihi transistors ma ọ bụ ike na sekit na sekit. Mgbe a na-eji ya maka ịgbado ọkụ nke ọgwụ na ihe mgbawa, ọ nwere ike izere ịgbado ọkụ izugbe nke ọgwụ rụrụ arụ n'ihi ihe ndị etisasịwo, ọ gaghị agbawa n'ihi okpomọkụ. Ọ bụ iji ultrasonic mmiri na ebili mmiri ịgbado ígwè wires. Ọ mejupụtara igbe dị ike, onye ntụgharị, onye na-ekpo ọkụ na onye isi ngwaọrụ. Tụkwasị na nke ahụ, a na-etinye ihe ndị na-achịkwa dị ka ogige, ngwaọrụ ndị na-agagharị, na microprocessors. Igbe ike gbanwere voltage mpụga (~ 220V, 50 ma ọ bụ 60Hz) na 20000Hz (20KHz), voltaji karịrị 1 volt, wee na-achịkwa igbe igbe iji mepụta ma mee ihe na transducer. A transducer bụ ukwuu oru oma eletriki akụrụngwa na-atọghata ike eletriki n'ime n'ibu ike. E jiri ya tụnyere ndị moto nkịtị, e nwere nnukwu ọdịiche abụọ dị n'etiti ndị ntụgharị: nke mbụ, onye ntụgharị ahụ na-agbanwe ike eletriki ka ọ bụrụ vibration kama ntụgharị; nke abuo, ọ na-arụ ọrụ nke ọma ma nwee ike ịgbanwe 95% nke ike eletrik. Mgbe akakabarede site na transducer, n'ibu ike na-etinyere na ịgbado ọkụ isi. Ejiri mpi ultrasonic mee ihe na titanium alloy ma rụọ ya n'ụdị a kapịrị ọnụ dị ka ụkpụrụ ị na-achọ iji hụ na ike kachasị nyefe.c
Mgbe igwe na-enye ọkụ na-ebute mkpu, ọ ga-enyocha ya dị ka ndị a
1. Nnwale ibu ọrụ, ma ọ bụrụ na ọrụ dị ugbu a bụ ihe nkịtị, ọ nwere ike ịbụ na isi ịgbado ọkụ na-emetụ aka na ihe ekwesighi ịmetụ aka ma ọ bụ ngbanwe oke dị n'etiti isi ịgbado ọkụ na oche ịgbado ọkụ.
2. Mgbe ule a na-enweghị ibu adịghị adị, buru ụzọ lelee ma enwere mgbape na isi ịgbado ọkụ, ma nrụnye ahụ siri ike, wee wepụ isi ịgbado ọkụ wee mepụta nyocha enweghị ibu iji kpochapụ ma enwere nsogbu na transducer + mpi, ma kpochapụ ya site na nkwụsị. . Mgbe iwepụsịrị ohere nke ọdịda nke mpi transducer +, dochie mpi ọhụrụ ahụ iji chọpụta.
3. Mgbe ụfọdụ enwere ọnọdụ ebe nnwale ahụ na-ebughị ibu dị mma, mana ọ nweghị ike ịrụ ọrụ ọfụma. O nwere ike ịbụ na akụkụ dị n'ime nke ike now dị ka ịgbado ọkụ isi, na-eme ka ụda ike na-ebufe ya. Nke a bụ usoro ikpe dị mfe: usoro aka aka. Ingkwado ọkụ na-arụ ọrụ ma ọ bụ mpi nkịtị na-arụ ọrụ dị iche iche mgbe ọ na-arụ ọrụ, aka na-adịkwa nro. Mgbe ike ụda na-adịghị mma, aka na-adị ka afụ ma ọ bụ burrs. A na-eji ụzọ mwepụ ewepụ akụkụ nsogbu. Otu ọnọdụ ahụ nwere ike ime mgbe generator anaghị adị, n'ihi na ọ na-abụkarị ihe ntụgharị ntụgharị ntụgharị kwesịrị ịbụ ezigbo ikuku, nke nwekwara ike ime mgbe enwere oghere ma ọ bụ usoro mgbanwe na-adịghị mma na sine wave. N'oge a, enwere ike dochie ike ịkpa oke nke ọzọ maka ịkpa oke.
Nke gara aga: Ahaziri 3000 Watt Roll Ultrasonic Metal ịgbado ọkụ maka Ewepụghị Solar Cells Aluminom Ọla kọpa Pipe Panel
Osote: 4200w Ike Dị Ike 15Khz Ultrasonic Plastik Welding Machine with Duration Control System
Ọgụgụ isi 15Khz Ultrasonic Generator Digital ...
3000W High Frequency 20Khz Ultrasonic Copper ma ọ bụ ...
High-eguzosi ike 70Khz All Digital Ultrasonic V ...
Kọlụm 30dị 30Khz 700w Ultrasonic Transducer ...
High Power 15Khz 2600w Ultrasonic ịgbado ọkụ Trans ...